भात खानेलाई हुनसक्छ क्यान्सर! – Health Post Nepal
भात खानेलाई हुनसक्छ क्यान्सर!
२०७८ मंसिर २५ गते १७:३४
बेलायतको एक अध्ययनले भात खानेलाई क्यान्सर हुनसक्ने देखाएको छ। वैज्ञानिकहरुका अनुसार धान उत्पादनको समयमा प्रयोग गरिने किटनाशक तथा विषालु केमिकलका कारण माटोलाई असर गर्ने र सोही माटोमार्फत विषालु केमिकल चामलमा सर्ने तथ्य फेला पारेको छ।
माटोबाट चामलमा जाने आर्सेनिक तत्वले व्यक्तिमा असर गर्नसक्ने जसले गर्दा क्यान्सर नै हुनसक्ने जोखिम अध्ययनले देखाएको हो। क्यान्सरमात्र नभई हृदय रोग पनि बढ्न सक्ने खतरा देखिएको छ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार आधा काँचो तथा पानीमा धेरैबेर नभिजाएको खानाले क्यान्सर गराउन सक्ने सम्भवना रहन्छ।
यसको खतरा किन बढिरहेको छ त?
वैज्ञानिकहरुका अनुसार खतराको सबैभन्दा मुख्य कारण आर्सेनिक हो। आर्सेनिक सबै पेस्टिसाइड तथा इसेक्टिसाइड्समा पाइन्छ। खेती गर्दा यस्ता विषादीहरुको प्रयोग बढी गरिन्छ। त्यस्तै, पानीमा पनि आर्सेनिक पाइन्छ। अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार कति देशहरुको भूजलमा आर्सेनिक पाइन्छ। यसले गर्दा खानेपानी तथा भोजनमार्फत शरीरमा प्रवेश गरिरहेको हुन्छ।
चामलबाटै किन धेरै खतरा?
चामलबाट धेरै खतरा हुन्छ किनकी, धानले धेरै पानी सोस्ने गर्छ र हामीले धान लगाउँदा प्रयोग गरेको विषादी पानीमार्फत धानका बालासम्म पुग्छ। यस्तै धान लगाउँदा धेरै पानीको आवश्यकता हुन्छ र पानीमा पनि धेरै आर्सेनिक हुनेकारण झनै खतरा बढ्छ। अध्ययनअनुसार लामोसमयसम्म आर्सेनिक शरीरमा रहे लक्षण देखा पर्न थाल्दछ। यस्तोमा चिकित्सकको सल्लाह लिन जरुरी छ।
खतरालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ?
क्विन्स युनिभर्सिटी बेलफास्टका वैज्ञानिकहरुले गरेको यस अध्यनमा खतरा कम कसरी गर्नसकिन्छ भनेर उपाय पनि दिइएको छ। यसको लागि आधा काँचो खाना खानु हुँदैन। यसलाई राम्रोसँग पकाएर मात्र खानुपर्छ।
चामलमा हुने आर्सेनिकका कारण वर्षेनी ५० हजारको मृत्यु हुने गरेको छ। नेपालमा बढीजसो घरपरिवार बिहान बेलुकै भात खान्छन् जसले स्वास्थ्यलाई निकै असर गरिरहेको हुनसक्छ।